ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဆောင်းရာသီသည်လှပသည်! ကမ္ဘာတွင်အကောင်းဆုံးဒီဇင်ဘာလ၏ နေရာ ၅ ခု!
ဆောင်းဦးမှ ဆောင်းရာသီသို့ ပြောင်းလဲသော ဒီဇင်ဘာလသည် ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နှင်းရှုခင်းများ၊ မီးထွန်းခြင်းများ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂုဏ်ယူနိုင်လောက်သော ရှုခင်းများစသော အမျိုးမျိုးသော ရှခင်းများကို မြင်နိုင်သောရာသီဖြစ်ပါသည်။
ယခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဆောင်းရာသီအစတွင် အရောင်အသွေးစုံလင်သော ( ဒီဇင်ဘာလရှုခင်း)များကို မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
အဲချိဇန်းပင်လယ်ကမ်းနားနှင့် စုအိဇန်း (ဖုခုအိခရိုင်)
ဒီဇင်ဘာလတွင် ကြည့်ချင်သောရှု့ ခင်းများအဆင့်၅ သည် အဲချိဇန်းပင်လယ်ကမ်းနား၏ စုအိဇန်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏စုအိဇန်းပန်း၏အကြီးဆုံးပွင့်သောဒေသဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလရောက်ပါက တောင်များ၏မျက်နှာပြင်စောင်းများတွင် လှပသော အဲချိဇန်းစုအိဇန်းများက ပွင့်ကြပါသည်။
အဲချိဇန်းပင်လယ်ကမ်းနားသည် (ဂျပန်နိုင်ငံ၏ညနေခင်း ၁၀၀ ) တွင်လည်း ပါဝင်သောရှုခင်းလှပသောနေရာ။. ညနေခင်းနေဝင်သည့်အချိန်တွင် ရွေဝါရောင် တောက်ပနေသော ပင်လယ်ကမ်းနားတွင်ပွင့်နေသော လှပသော ပန်းများသည် လူများကို တခဏတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစေပါသည်။ လှပသောပန်းများကို အပြည့်အဝခံစားပြီးနောက်တွင် အဲချိဇန်းဂဏန်းကို အစထားသော ဖုခုအိ၏ ပင်လယ်စာများက လျှာလည်လောက်အောင် ကောင်းမွန်ပါသည်။
Spot Page မှာ ဒီနေရာ
အဆင့် ၄ သည် မချုးခို၏ဆန်းပိရာ။ ဆန်းပိရာဆိုသည်မှာနေရောင်အလင်းတန်းများကို ဆိုလိုပြီး ဆောင်းရာသီ၏အေးမြသော ဒေသများတွင် မြင်နိုင်သော သဘာဝပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးတွင် စိန်များကဲ့သို့ အရောင်များက ရောင်ပြန်နေသော ပုံစံဖြစ်နေပါသည်။ ဒီပုံစံသည် ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသောအရာဖြစ်ပြီး လေထုထဲရှိအနေအထားများ မှ အနည်းငယ်ပုံစံ အလင်းရောင်များက ပြောင်းလဲပါသည်။
တကယ့်ကို ကောင်းကင်မှ နတ်သမီးများက ကခုန်နေသကဲ့သို့ လှပသော ပုံစံသည် ဆောင်းရာသီတစ်ကြိမ်တွင် တစ်ခါသာလျှင် လွန်စွာရှားပါးသော ရှ ခင်း။ ဆန်းပိရာကို ရည်ရွယ်ပါက အထူးသဖြင့် အေးမြသော နေ့ များတွင် သွားရောက်ခြင်းက ကောင်းပါသည်။
အဆင့် ၃ ကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ရာသီလေးခုလုံးတွင် လှပသော ရှုခင်းများရှိနေသော ခန်းရောခုအန်း။ ထိုအထဲတွင်အထူးသဖြင့် ဒီဇင်ဘာလသည် နှင်းများဖုံးလွှမ်းထားသည့် လွန်စွာလှပသောရှုခင်းကို မြင်နိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသော သစ်ပင်များကို နှင်းများဖုံးလွမ်းရာမှ ကာကွယ်ရန်လည်းပြင်ဆင်ထားခြင်းများသည် ဆောင်းရာသီအစမှ နွေဦးအထိ ခနဇဝ၏ အလှအပများဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်၂ သည် ဟိုကိုင်းဒိုး၏ ခနဲမိုရိအနီရောင်အုတ်ဂိုထောင်များတွင် ကျင်းပသော ဟကိုတဒဲခရစ်စမတ်ပွဲဖြစ်ပါ သည်။ (အနီရောင်အုတ်ဂိုထောင်) ဟု ကြားရသည်နှင့် ယော်ကိုဟားမသည် ထင်ရှားသော်လည်း နှင်းများကျသော ဟိုကိုင်းဒိုးတွင် ပုံပါသောပန်းချီစာအုပ်မှ ထုတ်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသော အနီရောင်အုတ်ဂိုထောင်များ ကိုလည်း မြင်နိုင်ပါသည်။
လက်ရှိတွင် ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ စားသောက်ဆိုင်များအဖြစ် သုံးနေကြပြီး ခေတ်မှီသော နေရာများတွင် အနုပညာဆန်သော ချိန်းတွေ့ မှုများလည်း လုပ်နိုင်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် (စနေ) အထိကြားထဲတွင် အထူးကြီးမားသော ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကို တန်ဆာဆင်ထားပါသည်။ နေ့ တိုင်း ၁၈း၀၀ မှ သစ်ပင်ကို မီးထွန်းခြင်း၊ မီးပန်းဖောက်လွှတ်ခြင်းများလည်း ကျင်းပကြသည့်အတွက် ဆက်ဆက်ညဘက်ကိုခံစားစေလိုပါသည်။
အယရှိယာမဟနမီးလမ်း မှ ဆဂနော့ ဝါးတော (ကျိုတို)
အဆင့် ၁ သည်ကျိုတို ဆာဂနော့ဝါးတော။ အနောက်နိုင်ငံ CNNတွင် ဖော်ပြခဲ့သော (ဂျပန်နိုင်ငံ၏အလှပဆုံးသော နေရာ ၃၁ခု) တွင် ပါဝင်သော၊ စာလုံးအတိုင်း (ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလှပဆုံးသော) နေရာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီလှပသောလမ်း၏ ဆွဲဆောင်မှုကြောင့် နှစ်စဉ်လူများစွာ လာရောက်လည်ပတ်ကြပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် (သောကြာ) မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် (တနင်္ဂနွေ) အထိ ကျင်းပသော (ကျိုတို အယာရှိယာမဟနမီးလမ်း) တွင် ဝါးတော၏လမ်းဘေးနှစ်ဘက်လုံးတွင် မီးထွန်းထားပြီး လင်းနေသောအလင်းရောင်ရှု့ ခင်းကို ခံစားနိုင်ပါသည်။ ကျိုတိုကို ခံစားချင်ပါက ဆက်ဆက်သွားရောက် သင့်သော ပွဲဖြစ်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလ၏ ရှုခင်းများသည် ဘယ်လိုလဲ
အနုပညာမြောက်သောချိန်းတွေ့ ခြင်းများမှ ရှု့ ခင်းများပြည့်နေသော နေရာအထိ ဒီဇင်ဘာလသည် ဆက်ဆက် လာရောက်လည်ပတ်သင့်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလခရီးသည် ဆက်ဆက်ဒီတစ်ကြိမ်မိတ်ဆက်ပေးထားသောနေရာများကို သွားပါ။
မြို့တွင်းမှာ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ သွားနိုင်တဲ့ ရှုခင်းဒေသဖြစ်တဲ့ ကမာကူရဖြစ်တယ်။ ပူနွေးတဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ အရမ်းကြီးနှင်းမကျနိုင်တဲ့ နေရာဖြစ်ပေမယ့် နှင်းကျတဲ့နေ့ က အမြဲတမ်းလို စည်းကားနေတာတွေ ငြိမ်သက်ပြီ...